Luka Asɛmpa 4:1-44
Ɔbonsam sɔɔ Yesu hwɛe (1-13)
Wɔannye Yesu antom wɔ Nasaret (16-30)
Ɔkɔɔ hyiadan mu wɔ Kapernaum (31-37)
Ɔsaa Simon asebea ne nnipa binom yare (38-41)
Nnipadɔm kohuu Yesu wɔ baabi a atew ne ho (42-44)
4 Ɛnna Yesu a honhom kronkron ahyɛ no ma no dan ne ho fii Yordan ho, na honhom no de no kɔɔ sare so+ 2 nnafua 40, na Ɔbonsam sɔɔ no hwɛe.+ Wanni hwee saa bere no, enti bere a nnafua 40 no baa awiei no, na ɔkɔm de no. 3 Ɛnna Ɔbonsam ka kyerɛɛ no sɛ: “Sɛ woyɛ Onyankopɔn ba a, kasa kyerɛ ɔbo yi ma ɛnnan paanoo.” 4 Nanso Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Wɔakyerɛw sɛ, ‘Ɛnyɛ paanoo nko ara na onipa nam so bɛtena ase.’”+ 5 Enti Ɔbonsam de Yesu kɔɔ bepɔw tenteenten bi so, na ɔkyerɛɛ no asaase so ahenni nyinaa prɛko.+ 6 Na Ɔbonsam ka kyerɛɛ no sɛ: “Mede tumi yi nyinaa ne ɛho anuonyam bɛma wo, efisɛ wɔde ama me,+ na obiara a mepɛ no, mede ma no. 7 Enti sɛ wobɔ wo mu ase baako pɛ som me a, mede ne nyinaa bɛma wo.” 8 Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Wɔakyerɛw sɛ, ‘Yehowa* wo Nyankopɔn na ɛsɛ sɛ wokotow no, na ɔno nko ara na ɛsɛ sɛ wosom no.’”+ 9 Afei ɔde Yesu kɔɔ Yerusalem kogyinaa asɔredan no atifi,* na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Sɛ woyɛ Onyankopɔn ba a, gyaa wo ho fi ha kɔhwe fam,+ 10 efisɛ wɔakyerɛw sɛ, ‘Wo nti ɔbɛsoma n’abɔfo sɛ wɔmmɛbɔ wo ho ban,’ 11 na ‘Wɔbɛsoa wo wɔn nsa so, na woamfa wo nan ampem ɔbo.’”+ 12 Ɛnna Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Wɔaka sɛ, ‘Nsɔ Yehowa* wo Nyankopɔn nhwɛ.’”+ 13 Enti bere a Ɔbonsam wiee sɔhwɛ no nyinaa no, ogyaw no hɔ kosii bere foforo a ɛfata.+ 14 Na Yesu san kɔɔ Galilea,+ na na honhom no tumi ahyɛ no ma. Na ne ho asɛmpa trɛw kɔɔ nkurow a atwa hɔ ahyia no nyinaa mu. 15 Afei nso, ofii ase kyerɛkyerɛe wɔ wɔn hyia adan mu, na wɔn nyinaa kamfoo no. 16 Na ɔbaa Nasaret,+ baabi a wɔtetee no no. Na sɛnea ɔtaa yɛ Homeda no, ɔkɔɔ hyiadan mu,+ na ɔsɔre gyinaa hɔ sɛ ɔrebɛkenkan ade. 17 Enti wɔde odiyifo Yesaia nhoma mmobɔwee no maa no, na obuee nhoma mmobɔwee no mu, na ohuu baabi a wɔakyerɛw sɛ: 18 “Yehowa* honhom wɔ me so, efisɛ wasra me sɛ memmɛka asɛmpa nkyerɛ ahiafo. Wasoma me sɛ memmɛka ogye ho asɛm nkyerɛ wɔn a wɔakyere wɔn, na memma anifuraefo nhu ade, na memma wɔn a wɔabubu mfa wɔn ho nni,+ 19 na menka Yehowa* adom bere* nkyerɛ nkurɔfo.”+ 20 Na ɔbobɔw nhoma mmobɔwee no, na ɔsan de maa ɔsomfo no, na ɔtenaa ase. Na wɔn a wɔwɔ hyiadan no mu nyinaa de wɔn ani hwɛɛ no dinn. 21 Ɛnna ofii ase ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Ɛnnɛ na kyerɛwsɛm yi a motee no seesei ara no aba mu.”+ 22 Na wɔn nyinaa fii ase dii ne ho adanse pa, na nsɛm a ɛka koma a efi n’anom+ no maa wɔn ho dwiriw wɔn. Na wɔkae sɛ: “Ɛnyɛ Yosef ba ni?”+ 23 Ɛnna ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Ampa, mubebu me bɛ yi sɛ: ‘Ɔyaresafo, sa wo ho yare. Nneɛma a yɛtee sɛ woyɛɛ no Kapernaum+ no, yɛ bi wɔ wo kurom ha nso.’” 24 Na ɔkae sɛ: “Nokware mise mo sɛ, odiyifo biara nni hɔ a wogye no tom wɔ ne kurom.+ 25 Mereka nokware akyerɛ mo: Elia bere so sɛɛ, bere a wɔtoo ɔsoro mu mfe abiɛsa ne abosome asia maa ɔkɔm kɛse baa asaase no nyinaa so+ no, na akunafo bebree wɔ Israel. 26 Nanso wɔansoma Elia ankɔ mmea yi mu biara nkyɛn, gye okunafo bi a ɔwɔ Sarefat, Sidon asaase so+ no. 27 Bio nso, odiyifo Elisa bere so no, na akwatafo bebree wɔ Israel; nanso wɔansa wɔn mu biara yare,* gye Siriani Naaman.”+ 28 Bere a wɔn a wɔwɔ hyiadan no mu nyinaa tee saa nsɛm no, wɔn bo fuwii.+ 29 Ɛnna wɔsɔre piapiaa no fii kurow no mu, na wɔde no kɔɔ bepɔw a wɔn kurow no gu so no ano sɛ wɔrekosum no ahwe ama ne kɔn akɔwɔ hɔ. 30 Nanso ɔfaa wɔn mfinimfini, na ɔtoaa so kɔɔ ne kwan.+ 31 Na osian kɔɔ Kapernaum, Galilea kurow bi mu. Na ɔkyerɛkyerɛɛ wɔn Homeda,+ 32 na ɔkwan a ɔfaa so kyerɛkyerɛe no yɛɛ wɔn nwonwa,+ efisɛ ɔde tumi na ɛkasae. 33 Ná ɔbarima bi wɔ hyiadan no mu a honhom fĩ wɔ no so, na ɔteɛɛm denneennen sɛ:+ 34 “Adɛn! Nasaretni+ Yesu, dɛn na yɛne wo wɔ yɛ? Wobae sɛ worebɛsɛe yɛn anaa? Minim onipa ko a woyɛ. Wone Ɔkronkronni a ofi Onyankopɔn hɔ+ no.” 35 Ɛnna Yesu kaa n’anim sɛ: “Yɛ komm, na fi ne mu kɔ.” Enti honhom fĩ no maa ɔbarima no twa hwee wɔn mfinimfini, na ofii ne mu kɔe a wanyɛ no hwee. 36 Na ɛyɛɛ wɔn nyinaa nwonwa, na wofii ase keka kyerɛɛ wɔn ho sɛ: “Asɛm bɛn ni? Ɔde tumi ne ahoɔden hyɛ ahonhom fĩ ma wopue kɔ!” 37 Enti ne ho asɛm trɛw kɔɔ nkurow a ɛbemmɛn hɔ no mu baabiara. 38 Bere a ofii hyiadan no mu no, ɔkɔɔ Simon fi. Ná Simon asebea yare atiridii a emu yɛ den, na wɔsrɛɛ no sɛ ɔnhwɛ no.+ 39 Enti okogyinaa ne nkyɛn teɛteɛɛ atiridii no, na egyaee. Ɛhɔ ara na ɔbea no sɔree, na ofii ase som wɔn. 40 Na bere a owia rekɔtɔ no, wɔn a wɔwɔ nkurɔfo a nyarewa ahorow ayɛ wɔn no de wɔn brɛɛ no. Na ɔde ne nsa guu wɔn mu biara so saa wɔn yare.+ 41 Ahonhommɔne nso fii wɔn mu pii mu, na ahonhommɔne no teɛteɛɛm sɛ: “Wone Onyankopɔn Ba no.”+ Nanso ɔkaa wɔn anim, na wamma wɔn kwan amma wɔankasa,+ efisɛ na wonim no sɛ ɔno ne Kristo no.+ 42 Na ade kyee no, ofii hɔ kɔɔ baabi a atew ne ho.+ Nanso nnipadɔm no fii ase hwehwɛɛ no, na wɔbaa baabi a ɔwɔ no. Na wɔyɛe sɛ wɔremma omfi wɔn nkyɛn nkɔ. 43 Nanso ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Ɛsɛ sɛ mekɔ nkurow foforo mu nso kɔka Onyankopɔn Ahenni ho asɛmpa no, efisɛ eyi nti na wɔsomaa me.”+ 44 Enti ɔtoaa so kaa asɛmpa no wɔ Yudea hyia adan mu.
^ Anaa “baabi a ɛwɔ soro paa wɔ asɔrefi hɔ.”
^ Anaa “Yehowa anisɔ afe.”
^ Anaa “wɔamma wɔn mu biara ho amfi.”